Wet n WildWild Shine Nail Color – Night Prowl | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners TOP BRANDS NUBY Mamy Poko စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းများ စကိတ်ဘုတ်များ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး လက်သည်းအလှအပ လက်သည်းနီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Wet n Wild Wild Shine Nail Color – Night Prowl Wet n Wild Wild Shine Nail Color – Night ProwlBy Wet n Wild (4) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများအရောင်စုံရနိုင်ခြင်းသုံးပြီးနောက် တောက်ပနေစေခြင်းFormaldehyde, Tolueneနှင့် Phthalates မပါဝင်ခြင်း Ks 840 Ks 4,200 -80% ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ The Beauty Boutique ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (1)4 မှတ် (1)3 မှတ် (2)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 3,84 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန် ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်အားလုံးဆုလေးနိုင်2016 ဒီဇငျဘာ 1 အရမ်းကြိုက်တယ်။အရောင်လေးလည်းဆန်းပြီး ဆိုးပြီးရင်လည်း တောက်တောက်ပပနဲ့ ဖြစ်နေလို့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Vicky2016 ဇူလိုငျ 1 addsanice look I'm notahuge user of glitter polish but this Wet n Wild nail color addsanice look without being over the top. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် Wet n wild အလှကုန်များWet n wild အမှတ်တံဆိပ် အလှကုန်များသည် အမေရိကန်နိုင်ငံအမှတ်တံဆိပ် အလှကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းရှိသည့်အတွက် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးတို့သည် ယင်းအလှကုန်များကို ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲလာကြပြီဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများကို အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းနိုင်ရန် နည်းပညာသစ်များဖြင့် စီမံဖော်ထုတ်ထားပြီး အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ဈေးကွက်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ပျိုမေတို့၏ အလှအပရေးရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည်ဆည်းပေးနိုင်သည့် wet n wild အလှကုန်များကို အသက်အရွယ်မရွေး၊ အသားအရောင်မရွေး ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင် အရည်အသွေးမြင့် wet n wild အလှကုန်ပစ္စည်းများကို လူတန်းစားမရွေးသုံးစွဲနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ဈေးကွက်ထဲတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ လက်သည်းနီ၊ မျက်လုံးဆိုးဆေးတို့မှစ၍ နှုတ်ခမ်းနီ၊ ပါးနီစသော အလှကုန်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး မည်သည့်ဖက်ရှင်မျိုးအတွက်မဆို လိုက်လျောညီထွေရှိသော မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများစွာကို ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာ အရောင်အများအပြားရှိခြင်းWet n wild အမှတ်တံဆိပ် အလှကုန်များကို ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးစွဲသူအမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ရုံးသွား၊ ကျောင်းသွားစသော နေ့စဉ်သွားလားလှုပ်ရှားမှုမျိုးအတွက် လိုက်ဖက်ညီသော သဘာဝအရောင်မိတ်ကပ်များသာမက ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ မိတ်ဆုံစားပွဲ၊ ကမ်းခြေဖက်ရှင်တို့နှင့်ပါ သင့်တော်သည့် ထင်ရှားသော အရောင်အသွေးရှိမိတ်ကပ်များကိုပါ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ခေတ်မီဆန်းသစ်သည့်အတွက် ပျိုမေတို့ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သော အလှကုန်များဖြစ်သည်။အမျိုးအစားစုံလင်သော wet n wild အလှကုန်များBrand အမျိုးအစားတစ်ခုထဲမှ အလှကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို သုံးစွဲလိုသူများအတွက် wet n wild အလှကုန်များသည် အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ လက်သည်းအလှအပနှင့် လက်သည်းကျန်းမာရေးအတွက် အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသော လက်သည်းနီ၊ လက်သည်းပေါင်းဆေး စသော လက်သည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အလှကုန်အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်သည်။ ထို့ပြင် အောက်ခံမိတ်ကပ်၊ ပါးနီ၊ ပေါင်ဒါ၊ concealer၊ မျက်တောင်ကော့ဆေး၊ မျက်လုံးဆိုးဆေးနှင့် နှုတ်ခမ်းနီ စသည်ဖြင့် အလှကုန်ပစ္စည်းအစုံအလင်ကို brand အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုထဲတွင် တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်နှစ်သက်သည့် မိတ်ကပ်စတိုင်လ်မျိုးကို လိုသလို ပုံသွင်းခြယ်သနိုင်ရန် wet n wild အလှကုန်များက အပြည့်အ၀ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိက အကြောင်းအရာများအရောင်စုံရနိုင်ခြင်းသုံးပြီးနောက် တောက်ပနေစေခြင်းFormaldehyde, Tolueneနှင့် Phthalates မပါဝင်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Wild Shine Nail Color – Night Prowl SKUWE930HBAA9W1NAFAMZ မော်ဒယ်လ်WWE467 Weight (kg)0.01 Non-Returnable
If your product is defective / damaged or incorrect / incomplete, then call our customer service 09 973 203 566 within7days of delivery.